Shiinaha Feed Fasalka Collagen warshad iyo alaableyda | Gelken
Koolajka fasalka ku quudin waxaa loo yaqaanaa budada caanaha xoolaha sababtoo ah qiimaheeda iyo nafaqada badan. Waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
Waxyaabaha borotiinku ku badan yahay, nafaqada, ka kooban borotiinka in ka badan 90%, oo hodan ku ah in ka badan 18 nooc oo ah amino acids, waxaana ku jira kaalshiyamka, fosfooraska, birta, manganese, selenium iyo xayawaanno kale oo muhiim ah iyo waxyaabaha raadraaca.
Waxaa loo isticmaali karaa digaagga, doofaarka iyo noocyada kale ee quudinta, waxay kobcin kartaa koritaankeeda, waxay hagaajin kartaa muuqaalka xoolaha.
Koolajka fasalka ku quudin waxaa loo isticmaalaa quudinta biyaha, oo leh iskudhaf amino badan iyo glycine fara badan, taas oo kaliya ahayn cunno soo jiidan wanaagsan laakiin sidoo kale waxay leedahay saamaynta kobcinta koritaanka. Isla mar ahaantaana, badeecadani sidoo kale waa dhejis wanaagsan oo loogu talagalay quudinta biyaha. Muuqaalka quudinta 'pellet feed or puffed feed biyaha' ee la soo saaray ka dib markii la isticmaalay badeecadani waa mid hagaagsan oo hagaagsan, heerka burburka si weyn ayaa loo dhimay, waqtiga haynta deggan ee seddaxda biyaha ayaa la hagaajiyay, wasakhda biyuhuna way yaraatay.
Codsiga warshadaha quudinta
1. Ku beddel cuntada kalluunka la soo dhoofiyo si loogu soo saaro cunno isku jira iyo kuwa isku jira
Kolajka Hydrolyzed, oo ah nafaqada nafaqada leh ee borotiinka xoolaha, ayaa loo isticmaalay in lagu badalo ama qayb ahaan loogu badalo cunada kaluunka la soo dhoofiyo ee soo saarida cunno isku dhafan iyo quudinta isku dhafan, iyo saameynta quudinta iyo faa'iidada dhaqaale ayaa ka wanaagsan tan kalluunka la soo dhoofiyo.
2. Waxaa loo adeegsaday sidii dhajiye loogu talagalay quudinta pellet
Ku darista 1% -3% kolajka 'hydrolyzate collagen' ee ku jirta quudinta 'pellet feed' waxay si cad u kordhin kartaa saameynta kala-baxa. Ku habboon quudinta biyaha, ma aha oo kaliya hagaajinta nuxurka borotiinka ceyriinka ah, iyo fududaanta kalluumeysiga iyo quudinta shrimp, hagaajinta mushaarka quudinta, ka hortagga wasakheynta biyaha.
Hore: Lafta xabagta xabagta
Xiga: Kaabsal adag oo faaruq ah